शेयर बजारमा ९.३२ अंक वृद्धि, कारोबार रकम ६६.७३ प्रतिशत बढ्यो
पोखरा २५ चैत । सोमवार नेप्से परिसूचक ९ दशमलव ३२ अंकले बढेको छ । निरन्तर ३ दिन बढेको परिसूचकसँगै कारोबार रकममा ६६ दशमलव ७३ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास अन्त्य हुँदै गर्दा नेप्से परिसूचकमा सुधार देखिन थालेको छ । दिनभरी उतार चढावमा रहेको शेयर बजार अन्त्यमा १ हजार १ सय ९१ दशमलव ६८ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
यस दिन होटल र ‘अन्य’ समूह बाहेक कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र शेयर बजार उकालो लागेको हो । निर्जीवन बीमा, लघुवित्त र जीवन बीमा समूहको परिसूचक २ भन्दा बढि प्रतिशतले बढेको छ ।
सोमवार रू. ९० करोड ६९ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यसदिन यो रकम रू. ३६ करोड २९ लाख बढेको हो । यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ८० प्रतिशत बढेर २ सय ५५ विन्दुमा पुगेको छ ।